Nbudata Fouga Zephyr FSX Acceleration v2.0 - Rikoooo
downloads 15 045
Modeled site RESTAURAVIA otu na nkwado nke ndị Royale French agha mmiri (RFN)
The Fouga Zephyr abịa na abụọ configurations:
- A "solo" nhazi (otu-pilot positioned on n'ihu oche)
- Otu njikwa "DC" abụọ nwere ndị ọkwọ ụgbọelu abụọ nọ n'ụgbọ elu. Isdị nke a ka adabara karịsịa iji “Shared Cockpit” nke FSX.
Ọtụtụ iche n'etiti ezi ụgbọelu na ndị a ụdị na-ẹkenam ime ka ojiji mfe n'ihi na mebere pilot:
- Imi gearwheel bụ steerable mgbe ahụ ezigbo Fouga e duziri on n'ala na brek
- A GPS, a vor / DME, a TACAN na akpaka pilot na-ẹkenam ma ụdị
NDỌ AKA NA NT!! Ezuputala 2 a maka FSXNtuchapu. Ọ dakọtara na Flight Simulator 2004 (FS9). Ndakọrịta ya na ụdị ọzọ nke FSX(SP1 - SP2) anaghị enwe obi ike.
O dikwa oke mkpa na-agụ akwụkwọ ntuziaka gụnyere na nke a ngwugwu gụnyere onye na-akụzi gị otú ị na adaa na a ụgbọelu ụgbọ mmiri (nnọọ ihe ọmụma)
Ebe a bụ a obere video iwebata site Amentiba
Ọ bụghị dị ka ma ama dị ka ya "akwa-nne-", na Fouga Magister ugbo elu, ndị Fouga Zephyr bụ naval version nke Fouga. Na mmalite nke fifties, na French Navy ọchịchị, na-achọ a mba ụzọ n'ịzụ ụgbọelu, bụ ndị dị nnọọ mmasị site na Fouga omume na-aga n'ihu n'ihi na French Air Force. An-emegharị version ka n'Òtù Ndị Agha Mmiri nkọwa e wuru na on 1956 July 31, akpa Fouga CM170M prototype, aha ya bụ "Esquif", mere ka ya mbụ ụgbọ elu. A zuo nke 30 aircrafts e amara gị ọkwa na nnyefe e spaced n'etiti 1959 na 1961. Nke a bụ otu Ịzụ wee a ụgbọ elu version renamed CM175 "Zephyr" dị na ndị ọzọ French Navy aircrafts n'oge a (Aquilon, Alize) site na iji ifufe 'aha. Ọzọkwa ndị Fouga Zephyr ji mee ihe French Navy, tumadi na Foch na Clemenceau ebu. N'oge ihe karịrị iri atọ na afọ, ndị Zephyr egosiwo ya pụrụ ịdabere na robustness àgwà n'okpuru oké eji ọnọdụ.
An aerobatic ìgwè efe efe Zephyr e kere 1961 site French Navy
Yiri yiri nnọọ ka Fouga Magister ugbo elu, ndị Zephyr na-Otú ọ dị e ji dị mkpa mgbanwe.
Onye edemede: Modeled site RESTAURAVIA otu na nkwado nke ndị Royale French agha mmiri (RFN)